"32 Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino; ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. 33 Ary tamin’ny hery be no nanambaran’ny Apostoly ny nitsanganan’i Jesosy Tompo; ary fahasoavana be no tao amin’izy rehetra. 34 Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy; fa izay nanana tany na trano, raha nivarotra izany, dia nitondra ny vola vidin’ny zavatra lafo, 35 ka napetrany teo anoloan’ny tongotry ny Apostoly, dia nozaraina tamin’izy rehetra araka izay nilainy avy 36 Ary Josefa, izay nataon’ny Apostoly hoe koa Barnabasy (izany hoe, raha adika, Zanaky ny fananarana), Levita, avy any Kyprosy no firazanany, 37 dia nivarotra ny sahany, ary nentiny ny vola vidiny ka napetrany teo anoloan’ny tongotry ny Apostoly." Asan'ny Apostoly 4:32-37
Firaisam-po amam-panahy. Izany no endrika nisehoan’ny fiarahan’ireo mpianatra voalohany tamin’izany fotoana izany. Inona no vokatr’izany? Tsy nisy nanonona ny fananany ho azy fa dia niombonany avokoa ny fananany rehetra. Mahavariana izany kanefa dia tena niainan’izy ireo tanteraka.
Nanambara tamin’ny hery be. Tanteraka eto sahady ilay nambaran’i Jesosy ao amin’ny toko 1:8 manao hoe:”Hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo”. Ka nanambara ny fitsangan’ny Tompo tamin’ny maty izy ireo. Izany ilay fijoroana ho vavolombelona nambaran’ny Tompo ihany koa. Tsy nisy tsy tanteraka izany izay nambaran’i Jesosy ny amin’ireto mpianatra ireto.
Fanontaniana: Efa nateraka indray ve ianao? Ahoana no hafanan’ny fijoroanao ho vavolombelon’ny Tompo tahaka izany?
Tsy hafanam-po fotsiny. Tsy hafanam-po ihany fa tena niseho tamin’ny fiainana andavanandro ny herin’ny Fanahyniasa tao anatin’izy ireo. Notanterahin’izy ireo ara-bakiteny ilay fampianarana famerimberin’ny Apostoly Paoly hoe: “Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny an’ny namany koa” (Filipianina 2:4 – Rômanina 15:2- I Korintianina 10:24). Vokatr’izany toe-po sy toe-panahy izany dia voalaza mazava eto fa “tsy nisy olona nalahelo teo aminy” (34). Tsy mahavariana sy mahafaly ve izany? Fiarahamonina tsy ahitana olona mahantra. Izany no fiarahamonina tonga lafatra katsahin’ny olombelona rehetra saingy tsy hainy iainana satria efa voalaza ihany koa fa ny olona ho tia tena, tia vola any am-parany any izay efa hita miharihary amin’izao fotoana izao. (II Timoty 3:1-3).
Fahatokiana. Fa anisan’ny zavatra mahafinaritra ihany koa tantaraina eto dia ny fahaizan’ny Apostoly nitantana ireo fananana natolotra azy. Fa izy ireo dia nizara ireo vola araka izay nilain’ny mpianatra tsirairay avy.
Faniriana: Mba ho fiarahamonina misy mpitondra mahatoky sy mpiara-monina mifampitsinjo anie ny Firenentsika.